MAQAATU SIRRA BA’E – Beekan Guluma Erena
MAQAATU SIRRA BA’E	Beekan Guluma Erena
Uncategorized April 9, 2016April 9, 2016	4 Comments
179SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
MAQAATU SIRRA BA’E
Qaanii hin beektu ol kaastee odeeffatta maqaankee guddaadha.
Akka ati dubbattutti si qofaatu garraamii; hormimmoo budaadha.
Kan dandeettii qabu inni sammuu qaraa
Qaalluun hunda caalu, beekaan dhoksaa baraa
Akka ati himattuttiAkka ati dubbattutti
Si maleeyyuu hin jiru hayyuun waaqaan muudame
Si’uma qofaadhas kan lammiif uumame
Garuu akkas miti mee waa sitti himuuree
Erga hayyuu ofiin jettee tarii na dhageessaa?
Moo hayyummaakee haaltee Mormaa jettee maqaa narra keessaa?
Silaa mormaan kunuu hiiknisaa maalinni?
Heera waraqaarraa kan hojiitti jijjiiruu didemoo isa gochamasaa hawwe isa kam mormaanii?
Anaafoo hiikuma mormaatu dide anaaf galuu
Mormaa maqaan jedhu tasayyuu naa malu
Situ hin barre Malee…
Mormaan sihumadha sii isa barreefama waraqaarraa hojiitti hin jijjiirre
Eyyee sihi Mormaan isa barataa gaaffii dhugaa gaafatu xobbeetti micciiree
‘Gaaffii mirgaa gaafachuun mirga’ jedhamee erga barreefame
Isa gaaffii gaafatemoo ? Isa hingaafattu jedhe, eenyuree kan mormee?
Yeroo akka bishaanii dhangala’u dhiigni dhalootaa
Silaa waraqichi ergaa hojiirra hinoolle maalinni taabotaa?
Sanas ta’us kanas
Mormaas bagan ta’ee
Moormaadhaaf deggeraa atuu wali Hin beektu
MAQAATU SIRRA BA’EE !!!! —
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa179SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Haqnis Haqaan Ka’e
Seenaa Qalbii Nama Hawwatu! →
4 thoughts on “MAQAATU SIRRA BA’E”	Abboomaa TolasaaApril 9, 2016 at 10:28 pmPermalink	Galatoomi Lalisaa yaada sirrii bifa walaloon dhiheesite.
Reply	kifluApril 10, 2016 at 3:29 amPermalink	Galata guddaa nu biraa qabda
Reply	ibsa kinfuApril 10, 2016 at 11:02 amPermalink	Ergaa guddaa qabaa galatoomi !
Reply	Lalisaa TakileeApril 12, 2016 at 6:58 amPermalink	isaaniif hin galle wanti isaan godhanii
rabbi salphina itti nuuf haa fidu malee